Sony IMX 586: sensor an'ny fakantsary Sony 48 MP | Androidsis
Sony IMX 586: Ilay sensor vaovao 48 MP Sony
Ny fakantsary dia iray amin'ireo singa lehibe indrindra amin'ny finday avo lenta. Hitanay tsy tapaka ny fomba filokana marika amin'ny fanavaozana, toy ny fahatongavan'ilay fakantsary triple aoriana. Sony dia iray amin'ireo orinasa ekena indrindra amin'ity sehatra ity, ary ny Japoney izao dia manolotra ny sensor vaovao ho azy ireo. Izy io dia sensor izay miavaka amin'ny famahana ny 48 MP.
Ny anarany dia Sony IMX 586 ary maneho fandrosoana lehibe ho an'ny orinasa izany. Hatramin'ny sehatra iray izay tsy nahitantsika fanovana lehibe na fanavaozana efa ela, ny orinasa dia manolotra vahaolana vaovao.
Ny zavatra nataon'ny orinasa dia ny fampihenana ny haben'ny pixel, hidina hatramin'ny 0.8 μm. Amin'izany fomba izany, amin'ny sensor miaraka amin'ny diagonal 8 mm, dia manana 48 MP isika. Ka asa lehibe eo amin'ny orinasa japoney io.
Sony dia nieritreritra ny zava-drehetra, toy ny fampihenana ny haben'ny pixel, mety hisy ny olana amin'ny sary amin'ny toe-java-maivana. Satria, mampiasa teknolojia antsoina hoe Quad Bayer ny orinasa. Ity dia sivana miloko izay hampiasa ny fampahalalana avy amin'ny pixel efatra amin'ny fotoana iray. Araka izany, sary 12 Mpx misy teboka 1.6 μm no hoforonina.
Eo amin'ny lafiny fandraketana dia ity sensor Sony ity azo ampifanarahana amin'ny fanapahan-kevitra samihafa. Noho izany, ny mpampiasa dia afaka manoratra amin'ny 4K (4096 × 2160) amin'ny 90 fps; 1080p amin'ny 240fps na 720p amin'ny 480fps. Mampanantena ny hanome safidy ho an'ireo mpampiasa izay hanoratra horonantsary safidy vitsivitsy aza.
Ny vidin'ity sensor Sony ity Ho lasa 3.000 yen izany, tsy anisany ny haba, izay manodidina ny 23 euro no hiova. Hivoaka amin'ny faran'ny volana septambra izao. Ka mety hitantsika alohan'ny faran'ny taona ny telefaona iray izay mampiasa azy io, ary azo antoka fa amin'ny taona 2019 dia ho hitantsika betsaka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony IMX 586: Ilay sensor vaovao 48 MP Sony
Ireo ny sasany amin'ireo asan'ny S Pen an'ny Galaxy Note 9